Zvekuita kuti urege kufunga nezve ex partner | Bezzia
Chii chekuita kuti urege kufunga nezve ex partner
Maria Jose Roldan | 21/06/2022 22:59 | Hukama
Hazvisi nyore kana nyore kugumisa kufambidzana. Kuvhura peji inguva yakaoma kuvanhu vazhinji, kunyanya kana usingaregi kufunga nezvewawakambofambidzana naye zuva rese. Nokuda kweizvi, zvakakosha kuti upinde mumatanho akasiyana-siyana ekusuwa uye kukwanisa kuvakazve hupenyu nenzira yakanakisisa.
Muchinyorwa chinotevera tiri kuzokupa nhevedzano yenhungamiro inogona kukubatsira kukanganwa nezvewawakambofambidzana naye.
1 Remekedza rhythms yekuchema
2 Manzwiro anoshanda uye anodiwa
3 Tsvaga chimwe chinhu chinokuzadza nekunyepa
4 Iwe unofanirwa kuvhura peji uye kukanganwa nezve ex-partner
5 enda kune nyanzvi
Remekedza rhythms yekuchema
Nguva zhinji, chikanganiso chikuru chinoitwa chekuisa pfungwa yekurega kufunga nezve waimbova mudiwa. Zvakajairika kuti zvakaoma kurega kufunga uye kuzadzisa icho chinhu chinotora nguva yako. Iwe unofanirwa kuziva nzira yekuremekedza rhythms yekuchema uye iva nemoyo murefu kusvikira nguva yasvika apo pasina kufunga nezvewaimbova mudiwa.
Manzwiro anoshanda uye anodiwa
Kurambana nemumwe wako kunokonzeresa kutevedzana kwemanzwiro emarudzi ese, kubva mukusuwa kuenda kushuva kana mhosva. Zvakajairika kuti marudzi aya emanzwiro aitike uye ndosaka zvakakosha kuasimbisa. Kubvumira manzwiro akadaro kunokosha kana zvasvika pakuvhura peji uye kupedza kurambana.
Tsvaga chimwe chinhu chinokuzadza nekunyepa
Zvakakosha kutarisa chimwe chinhu chinogona kudzorera kunyengera kwakarasika. Chero chinhu chinoenda kuti urege kufunga nezve waimbova mudiwa uye urarame uine tarisiro uye positivity zuva nezuva. Kuzvidzongonyedza nezvimwe zvinokuvaraidza kana zvaunofarira zvinokutendera kuti urambe uri muchimiro chekunakidzwa uye unakirwe nehupenyu.
Iwe unofanirwa kuvhura peji uye kukanganwa nezve ex-partner
Iwe unofanirwa kuziva nzira yekuvhura peji uye ziva kuti kutenderera kwasvika kumagumo. Kuti uite izvi, tsika yekufananidzira inogona kuitwa uye zvisungo zvakatemwa newaimbova mudiwa. Tsika ndiyo kiyi kana zvasvika pakurega kufunga nezvemunhu uye kukwanisa kunakidzwa nehupenyu hutsva.
enda kune nyanzvi
Kana zvichidiwa, unogona kukumbira nyanzvi kuti ubatsirwe. Vanhu vazhinji havakwanisi kucheka hukama nevaimbova shamwari yavo vari vega uye vanozoda rubatsiro rwenyanzvi. Chero rubatsiro ruduku kana zvasvika pakubvuma kurambana uye kudzivisa chero rudzi rwekufunga nezvewaimbova mudiwa.
Muchidimbu, hazvisi nyore kurega kufunga nezvewaimbova shamwari yako. Munhu wega wega akasiyana, saka kuziva nzira yekusimbisa manzwiro akasiyana uye kurega nguva ichipodza maronda ese chinhu chakakosha. Zvakakosha kuti usazvitongesa nenzira yakaipa yekufunga nezvewaimbova wawakaroorana naye uye kuita zvose zvinogoneka kuitira kuti marwadzo arege kupera nekufamba kwenguva. Dzimwe nguva kuzvimaka kana kumisa zvimwe zvinangwa zvinogona kukubatsira kukunda kusuwa. Yeuka kuenda kune unyanzvi kana iwe usingakwanisi kubvisa pfungwa dzakadaro kubva mumusoro wako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Chii chekuita kuti urege kufunga nezve ex partner
Kufambidzana maapplication ari kuramba achikura muSpain